पैसा पाएर जिन्दावाद-मुर्दावाद भनेका, हाच्छ्युँ गर्दा पुक्लुक्कै भएका सबका सबलाई शहिद नबनाऔँ ! -रवी लामिछाने – पुरा पढ्नुहोस्……
पैसा पाएर जिन्दावाद-मुर्दावाद भनेका, हाच्छ्युँ गर्दा पुक्लुक्कै भएका सबका सबलाई शहिद नबनाऔँ ! -रवी लामिछाने
कुनै दिन यो मुलुकमा बोल्न पाइदैनथ्यो । आज हामी आँफुले देखेको आफुलाई लागेका कुरा शानले चिच्याइ चिच्याइ भन्न पाइरहेका छौँ । यो दिन त्यसै आएको होइन ।
-जनतासँगसिधाकूरा प्रस्तोता रबिलामिछानेको कार्यक्रमको सूरूवाति प्रसतूती न्यूज24बाट साभार गरियको हो।
Prev“सिधा कुरा जनतासँग” आजको स्पेशल कार्यकम लाइभ हेर्नुहोस् (LIVE News 24 TV)
Nextदमकमा भेटियो यस्तो टाउको भएको २ बर्षिय बालिका, आर्थिक अभाबका कारण उपचारमा समस्या …
दश बर्षे बालक जसले अशोक दर्जीको गीत गएर सबैलाई रूहाए हेर्नुहोस (भिडियो सहित)
रवीसँग गु’हार माग्दै इराकबाट कार्यक्रममा लाइभ आएका हरिबहादुरको उ’द्धार भयो -हेर्नुहोस (भिडियो सहित)
विदेशमा अलपत्र नेपालीलाई स्वदेश फिर्ता ल्याउन हिमालयले सार्वजनिक ग-यो नियमित उडानको भाडादर